Nahare Ve? Niverina Ny Global Voices Podcast · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2016 5:32 GMT
Taorian'ny telo taona niatoana dia niverina ihany tamin'ny farany ny Global Voices Podcast. Antsoinay indray izao fiverenany izao ho : “The Week That Was at Global Voices” na “Ny Herinandro tato amin'ny Global Voices”.
Ato amin'ity andiany ity, hitondra anao hitety an'i Meksika, Shina, Tajikistan, Makedonia ary Rosia ny Toniam-baovaon'ny Global Voices sy Izaho — Tonia Mpanatanteraka ato amin'ny Global Voices– .
Ao Meksika, hiIaza aminao izahay ny tantaran'i Arne Aus den Ruthen, mpiasam-panjakana Meksikana iray mampiasa ny [fampihatra] Periscope hanehoana ireo mpanitsakitsaka ny lalàna, ao amin'ny tantara iray nentin'ny mpanoratra ato amin'ny Global Voices J.Tadeo ho antsika.
Manaraka izany izahay hilaza aminao ny tantaran'ny fanampenam-bavan'ny herinandro avy any Shina, izay nanairan'ny Tonian'ny Azia Avaratra-Atsinanana Oiwan Lam antsika. Aorian'izany izahay mitondra anao mankany Tajikistan, avy eo Makedonia ary avy eo nisy ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Tonian'ny Akon'ny RuNet, Kevin Rothrock, momba ny filma vaovao iray manindry an'i Harry Potter raha mampiseho ny fitiavan-tanindrazana diso fatra-piahiahy an'i Rosia.
Faly izahay mamerina indray ny Global Voices Podcast. Isaorana indrindra ireo mpanoratra, mpandika lahatsoratra ary tonia nanampy tamin'ny famitana ity fizarana ity.
Amin'ity andian'ny Herinandro Tato Amin'ny Global Voices, izahay manasongadina ireo hira manana ny lisansa Creative Commons avy amin'ny Arisivan'ny Mozika Maimaimpoana, mahatafiditra ny Please Listen Carefully avy amin'i Jahzzar, Mexico avy amin'i Jimmy Pe, Air Hockey Saloon avy amin'i Chris Zabriskie, Rainbow Street avy amin'i Scott Holmes, ary A Russian Circus Story avy amin'ny The Freak Fandango Orchestra.
Manantena ny hahare ny feonareo indray ao anatin'ny tapabolana.